❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Newcastle University တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း (၈ဝ)ကျော်နှင့်ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုဖြင့် International Year One in Business ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသူ မစောယုသံလွင်❞ – Crown Education
🇲🇲 မြန်မာနိုင်ငံမှာ GAC Program တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Newcastle Universityတွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်အပြင် မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း(၈ဝကျော်)နှင့်ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုဖြင့် International Year One in Business ပထမနှစ်သင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ မစောယုသံလွင်အတွက် CROWN Education and Royal Academic Institute မိသားစုမှ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးမှာလည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
.Saw Yu Than Lwin
❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Sussex တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း သိန်း(၇ဝ)ကျော်နှင့် ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုဖြင့် International Year One in Mechanical Engineering ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသား မောင်အောင်ထက်ဝင်း❞
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Pandemicကာလအတွင်းမှာ ဒီအတိုင်း ထူးလာမှာမဟုတ်ဘဲ အသက်ကြီးသွားမယ့်အတူတူဆိုတော့ အချိန်လည်းမဆွဲချင်တာနဲ့ Onlineကနေ တက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ . Onlineကနေ လေ့လာသင်ယူရတာ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလဲဆိုရင် ညီမအနေနဲ့ 80%လောက် ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ အပြင်မှာ Face-to-Face တက်ရတာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် Onlineကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စာလုပ်ချိန်ပိုများလာတယ်။ . Self-studyလည်းဖြစ်တယ်၊ Reflectionတွေလည်း ရတယ်ဆိုတော့ Onlineကပဲ ဆက်တက်ဖို့တော့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Face-to-Faceအတန်းတွေ တက်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားသွားတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ . မစံထားခိုင်အနေဖြင့် ယခုအခါ Covid-19 outbreakအလွန် ...